GNOMEApps3: The GNOME Community Development Applications | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | applications များ, GNU / Linux များ
ဒီနေ့ငါတို့ရဲ့တင်ပြချက်ကိုအပြီးသတ်တင်ပြလိမ့်မယ် ပစ္စည်း ၃ မျိုးပါ အပေါ် "GNOME ကွန်မြူနတီအက်ပ်များ"မရ။ ယနေ့ထုတ်ဝေသောစာသည်ထုတ်ဝေမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည် တတိယအပိုင်း "(GNOMEအက်ပလီကေးရှင်း ၁) နှင့်သက်ဆိုင်သည် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသုံးချမှုများ.
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်၊ ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားလာနေသောအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော application များစာရင်းပြုစုခြင်းအားစူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြင့်အပြီးသတ်ပါ "GNOME ကွန်မြူနတီ"၎င်း၏ website အသစ်တွင် GNOME အတွက်လျှောက်လွှာများမရ။ ဤနည်းအားဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သုံးစွဲသူအားလုံးကိုသူတို့အကြောင်းအသိပညာမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည် GNU / Linux များအထူးသဖြင့်အသုံးမ ၀ င်သောသူများ "GNOME» como « Desktop Environment » အဓိကသို့မဟုတ်တစ် ဦး တည်း။
GNOMEApps1: GNOME Community Core Applications များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင် ၂ ကိုစူးစမ်းလေ့လာလိုသူများအတွက် ခေါင်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ဝေမှုများ အခြားသူများနှင့် ပို၍ ဆင်တူသည်၊ သင်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသည်နှင့်အောက်ပါ link များကိုနှိပ်ပါ။
GNOMEApps2: GNOME Community စက်ဝိုင်း၏အသုံးချမှုများ
နောက်ထပ်တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကိုနှိပ်ပါ ဖန်တီးထားသော application များ က «KDE အသိုင်းအဝိုင်း» နှင့် «XFCE ကွန်မြူနတီ».
1 GNOMEApps3: ဖွံ့ဖြိုးရေးအပလီကေးရှင်းများ
1.1 ဖွံ့ဖြိုးရေးအပလီကေးရှင်းများ - GNOME ဂေဟစနစ်ကိုတိုးတက်စေသောအပလီကေးရှင်းများ
1.1.1 သင်္ကေတအစမ်း app ကို
1.1.6 Dconf အယ်ဒီတာ
1.1.7 အရောင် palette
1.1.8 Sysprof ပါ
ဖွံ့ဖြိုးရေးအပလီကေးရှင်းများ - GNOME ဂေဟစနစ်ကိုတိုးတက်စေသောအပလီကေးရှင်းများ
ဤဧရိယာ၌ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသုံးချမှုများ, အ "GNOME ကွန်မြူနတီ" တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည် 09 applications များ အဲဒီအရာတွေအားလုံးကိုငါတို့ကမှတ်ချက်ပေးလိမ့်မယ်။
သင်္ကေတအစမ်း app ကို
၎င်းသည် GNOME desktop အတွက် application icon များဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆော့ဝဲအသုံးဝင်မှုသည်လက်ရှိဗားရှင်း ၂.၁.၂ အတွက်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏နောက်ဆုံးမှတ်ပုံတင်ထားသော update မှာ 2.1.2/27/03 တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတီထွင်ခဲ့သည် GPL-3.0 လိုင်စင်အောက်တွင် Bilal Elmoussaoui နှင့် Zander Brown
၎င်းသည် application များအတွက်သင်္ကေတသင်္ကေတများပါ ၀ င်သော software utility တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားမှန်ကန်သောသင်္ကေတကိုမည်သည့် GNOME application တွင်မဆိုသုံးနိုင်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း 0.0.8 ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၄ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၎င်းသည် GNOME အတွက်တက်ကြွစွာစီမံထားသော Integrated Development Environment (IDE) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် GTK +, GLib နှင့် GNOME API များကဲ့သို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော GNOME နည်းပညာများအတွက် built-in အထောက်အပံ့ကိုပေါင်းစပ်ထားသော syntax highlighting နှင့် snippets ကဲ့သို့မည်သည့် developer မဆိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း 40.2 ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၅ ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
၎င်းသည်အရောင်နှစ်ခုအကြားခြားနားမှုကိုစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုသော software တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် WCAG လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအရောင်နှစ်ခုအကြားခြားနားချက်ကိုစစ်ဆေးသည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း ၀.၀.၃ ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၎င်းသည် API စာရွက်စာတမ်းများရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းအတွက် developer tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ စာကြည့်တိုက်များကိုရှာဖွေရန်၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သို့မဟုတ် macro တို့ဖြင့်ရှာဖွေရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။ ၎င်းသည် GTK-Doc နှင့်မူလအလုပ်လုပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် GTK နှင့် GNOME စာကြည့်တိုက်များကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း 40.1 ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၎င်းသည် configuration database ကိုတိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသော tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆက်တင်များကိုသုံးသောအပလီကေးရှင်းများကိုတီထွင်သောအခါ၎င်းသည်အသုံးဝင်သည်။ setting များကိုတိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်ခြင်းသည်အပလီကေးရှင်းများကိုအလုပ်မလုပ်စေနိုင်သောအဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သတိနှင့်သုံးပါ။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း 3.38.3 ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
၎င်းသည်ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း GNOME အရောင် palette ကိုကြည့်ရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း 2.0.0 ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းကိုတီထွင်ခဲ့သည် Zander Brown သည် GPL-3.0 လိုင်စင်အောက်တွင်ရှိသည်။
၎င်းသည် debugging နှင့် optimization ကိုအထောက်အကူပြုရန် application များကိုပရိုဖိုင်းပေးနိုင်သော software utility တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုဖိုင်းအားဖြင့်သူသည်ပရိုဂရမ်တစ်ခုသည်၎င်း၏အချိန်အများစုကိုအသုံးပြုသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကူညီရှာဖွေခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း 3.42.0 ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
၎င်းသည်အိုင်ကွန်များကိုလွယ်ကူစွာဖန်တီးရန်၊ အစမ်းကြည့်ရန်နှင့်ထုတ်ရန်ကူညီသောအသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း 0.0.2 ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းကိုတီထွင်ခဲ့သည် GPL-3.0 လိုင်စင်အောက်တွင် Bilal Elmoussaoui
အတိုချုပ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုမျှော်မှန်းသည် တတိယနှင့်နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု "(GnomeApps3)" လက်ရှိတရားဝင်လျှောက်လွှာများ "GNOME ကွန်မြူနတီ"နယ်ပယ်၌ရှိသူများကိုရည်ညွှန်းသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသုံးချမှုများ စိတ် ၀ င်စားဖို့၊ အဲဒါတွေကိုလူသိရှင်ကြားလုပ်ပြီးအသုံးချနိုင်အောင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ apps များ အမျိုးမျိုးအကြောင်း GNU / Linux Distros ဒါကြောင့်ငါတို့ကဒီလိုကြံ့ခိုင်ပြီးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်စုပြုံခြင်းဖြင့်ကူညီသည် software toolkit ပါ ဘယ်လောက်လှပပြီးအလုပ်ကြိုးစားတယ် Linuxera ကွန်မြူနတီ ငါတို့အားလုံးကိုကမ်းလှမ်းတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » GNOMEApps3: GNOME Community Development Applications မှ
Kali Linux 2021.3 သည် TicWatch Pro အတွက် NetHunter ဗားရှင်းအသစ်များနှင့်အတူရောက်ရှိလာသည်